TTSweet: ယိုးဒယား ငါးဖယ်ကြော် ( Thai fish cake)
Labels: (၆ ၀၀) ယိုးဒယား အစားအသောက်များ, (၆- ၁) Thai fish cake
သက်ဝေ September 22, 2011 at 4:40 PM
ယိုးဒယားဆိုင်မှာ စားလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းအစပ်တွေ အားလုံး တူတူပဲ... အဲဒီထဲကမှ Thai Fish Cake ကို အရမ်းကြိုက်တယ်... ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီး ကြော်စားရမှာတော့ ပျင်းတယ်... (အန်တီသက်ဝေ မပျင်းတာ ဘာများရှိသလဲ လို့ မမေးရ...) ဒါကြောင့် ဆိုင်မှာပဲ စားဖြစ်တယ်...
ကျန်တဲ့ အိမ်သားတွေ ဘယ်သူမှ မကြိုက်လို့ မှာလိုက်တိုင်း တပွဲလုံး တယောက်တည်းစားရတယ်... ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ... ဟဲဟဲ
nilar September 22, 2011 at 5:13 PM
မြသွေးနီ September 22, 2011 at 5:27 PM
မွှေးပြီး အရသာရှိနေမှာ သေချာတယ်..။
ဒီမှာ ငါးဖယ်ငါးဘောင်းကြော် လုပ်စားတာနဲ့ နည်းနည်းတူတယ်။
ထည့်တဲ့ Ingredientတွေ ကွာတယ်..။
အဲ.ဒီပန်းကန်ပြား အနားကွပ်အပြာရောင်ကိုအလွတ်ရနေပြီ တီဆွိး)
(ဟီးဟီး ကွန်မန်.က ငါးခြစ်ကြော်နဲ.ဘာမှမလဲမဆိုင်ဘူးနော် )
mstint September 22, 2011 at 6:43 PM
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ငါးခြစ်ကြော်ကို စွိတီကစားပြထားသေးတယ်း)) နည်းပညာလေးအတွက် ကျေးဇူးနော်။
ဘေဘီ September 22, 2011 at 7:28 PM
ကျမလည်း ကြိုက်တယ်။ ရှောက်ရွက်လေးပါထည့်ရင် သိတ်ကောင်းပေါ့း)
Mo September 22, 2011 at 7:51 PM
I've never eaten that dish.
Look yummy; I'll try it soon. :)
T T Sweet September 22, 2011 at 9:54 PM
Yes Mo, this dish is really really nice, you will definitely like it.
ဘေဘီပြောမှ သတိရတယ်။ ရှောက်ရွက် မရှိလို့ သံပုရာသီးခွံကို ခြစ်လေးနဲ့ ခြစ်ပြီး ထည့်ထားတာ။ ပြန်ပြင် ထည့်လိုက်ဦးမယ်။ ကျေးဇူးညီမ။
ဟီးဟီး အိမ်မှာ အဲဒီအနားကွက် အပြာရောင်ပဲ ထုတ်သုံးနေတား)အဲဒါ စင်္ကာပူက သယ်လာတာ။ စလုံးမှာ မယ်လမင်း ပန်းကန်သုံးလက်စတွေ အကုန်ထားခဲ့တာ။ ဒီမှာ ကြွေတွေပဲသုံးတာများတယ်။
မြသွေး လုပ်စားကြည့် 100% recommend ;)
နီလာရေ ကြိတ်စက်က အိမ်မှာ ပုံမှန် ငရုပ်သီးကြက်သွန်ကြိတ်တဲ့ ဘလန်ဒါနဲ့ပဲလေ။
အန်တီသက်ဝေ တူတူပဲ ... တူတူပဲ သူတို့မကြိုက်လေ ... ကိုယ်စားရလေ ... မကြိုက်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရတယ် ... (ဟမ် ))))
မသက် September 23, 2011 at 3:23 AM
အစ်မ အုန်းနိူ့ မှုန့်လေး နဲ့thai red curry paste ကို ရောနှယ်ပြီးကြော်ရင် ပိုကောင်းတယ်။ ဆိုင် က ရောင်းတဲ့အတိုင်း ရမယ်။
San San Htun September 23, 2011 at 11:33 AM
ဖိုးတုတ် September 23, 2011 at 1:56 PM
ခက်တယ်ဗျို.၊ မချက်ချင်ဖူး၊ ထိုင်းကထုတ်တဲ့ ရယ်ဒီမိတ်ကို ကျော်စားဖူးတယ်၊ စားလို.မကောင်းဖူး၊ အော်စီကို ကျွန်တော်တို.မိသားစု အလည်လာတော့မှပဲ ထမင်းဖိတ်ကျွေးနော်၊ ဆွေပြမျိုးပြပေါ့၊ တစ်လွဲမတွေးပါနဲ.၊ မြိန်ရာဟင်းကောင်း ခင်ရာဆွေမျိုးဆိုတဲ့စကားပုံလိုပေါ့၊ (စကားပုံက ဟုတ်ရဲ့လားမသိဖူး) ၊
susu September 23, 2011 at 2:40 PM
စံပယ်ချို September 23, 2011 at 8:15 PM
naychisunshine September 24, 2011 at 2:07 AM
T T Sweet September 24, 2011 at 3:25 AM
နေခြည် အဲဒီမှာ အန်တီဆွိ gmail
စပါယ်ရေ လုပ်စားကြည့်ပါ။ သိပ်စားကောင်းပါတယ်။
တီတီစု ကတော့ ရီရတယ်။ အဲဒါဆိုလဲ ငါးဖယ်ခြစ်ပြီးသားဝယ်လုပ်လေ။ တကယ်ကြီး စားကောင်းတာနော်။
ကိုဇက်၃လုံးး) ၀ူးမောင်ရှိမ့်တစ်ယောက် လက်နက်ကရိယာတွေ ၀ယ်စုနေတယ်ဆိုတာ သတင်းသိုးသိုးသန့်သန့်လေးမှ မကြားမိဘူးလားး)
ညီမငယ် စန်းထွန်း ပုံပြပြီး နှိပ်စက်သလိုဖြစ်နေပြီ။ ချားချင် ချားတွားလေး)
မသက် ကျေးဇူး ဟုတ်တယ်။ သူ့ အောရီဂျင်နယ် ရက်စ်ပီက Thai read chilli paste ရယ် ပဲသီး၊ နံနံပင်၊ ငါးငံပြာရည်ရယ်ဗျ။ ဒီမှာ Thai red chilli paste အလွယ်တကူရှာမရတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အစအဆုံး လုပ်ရတော့တာ။ အဲဒါလေး ပို့စ်မှာထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်။ အုန်းနို့တော့ မပါဘူးဗျ။ နဲနဲ ကွဲတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီပေ့စ်ရှာတွေ့ရင်တော့ တို့က ထပ်ကြော်စား .... ဦး ....မှာ ...း)